GS Typing Tutor 2.99...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ GS Typing Tutor 2.99 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Computer ကိုအခုမှလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ လက်ကွက်ကျင့်နည်းလေးပါ...! ကြိုးစားပြီးတော့ လေ့ကျင့်လျှင် နောက်ပိုင်း Keyboard ကိုမကြည့်ပဲ လွယ်ကူစွာ စာတွေကိုရိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်...! အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေအေင်လို့ ကျွန်တော် KEY လေးတွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 2.14 MB ပဲရှိပါတယ်...!လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "GS Typing Tutor 2.99...!"